Ny horonan-tsarimihetsika Osprey dia nahazo ny vidin'ny fampisehoana amin'izao fotoana izao amin'ny Septambra 28th! - NAB mampiseho ny vaovao amin'ny Broadcast Beat. Mpanolotra ofisialin'ny NAB Show, mpamokatra ny NAB Show LIVE
Home » Featured » Ny horonan-tsarimihetsika Osprey dia nahazo ny vidin'ny fampisehoana amin'izao fotoana izao amin'ny Septambra 28th!
Ny horonan-tsarimihetsika Osprey dia nahazo ny vidin'ny fampisehoana amin'izao fotoana izao amin'ny Septambra 28th!
Osprey Video dia manana prix mahagaga mahatalanjona amin'izao fotoana izao amin'ny Septambra 28th. Na ianao no mpampiasa ny endriny na ny rafitra mpanatontosa, ny fampidirana farany ny rackmount sy ny monitors amin'ny saha dia hanatsara ny endriky ny vahaolana farany ho an'ny vahaolana tsy manam-paharoa. Jereo ny soso-kevitra etsy ambany!
The Osprey RM12G-1 12G-SDI dia monitora 4K ahitana seza 3840 2160 marina. Izy io dia toy ny mpanara-maso eo am-pamolavolàna ao anaty trangam-pandehanana mafy na nalaina tao amin'ny 19 "Rackmount Monitor. Ny entana 4 SDI dia ahitana roa mifandray 12G ary fanampiny roa fanampiny amin'ny 3G. Manohana ny rohy tokana 12G SDI Video toy ny Dual 6G sy Quad 3G 4K60 Video. Ao amin'ny fomba fitrandrahana Quad, Two Sample Interleaved ary koa ny Division Division. Ny fidirana SDI rehetra dia misy Loopout. Ankoatra ny input SDI RM12G-1 koa dia manohana efatra HDMI inputs, iray HDMI2.0 voafantina ao amin'ny 4k60 plus telo HDMI1.4 nomena amin'ny 4K30. Ny fitaovan'ny fitaovam-peo sy ny mpandahateny miditra dia manome fepetra fanaraha-maso Audio. MSPR- $ 2490 Ankehitriny- $ 2241.00
The Osprey RM3G-2 dia Dual Rackmount Monitor izay manohana SDI, HDMI ary Analog Video Inputs ary TALLY. Voafaritra ho an'ny fidirana rehetra ny loopouts. Famelabelaran-tsary (rehetra amin'ny feno BNC sy HDMI) ahitana 2x 3G-SDI miaraka amin'ny Loopouts / 2x HDMI1.3 miaraka amin'ny Loopouts / 2x Composite miaraka amin'ny Loopouts / 2x Component miaraka amin'ny Loopouts. Fanaraha-maso eo an-tokotany no manana ny horonan-tsarimihetsika fanovozana, maneho ny fanitsiana, ny jiro tally, ny aspect ratio, ny lozam-pandrefesana, ny fanovana ny rafitra. Anisan'izany ny taona 2. MSRP- $ 690.00 Ankehitriny- $ 552.00
The Osprey MVS-8 dia 8 Channel Rackmount Monitor izay manohana ny 3G-SDI. Izy io koa dia maneho Audio Bars sy Time Code Display. Video Connections (feno manontolo BNC) ahitana 8x 3G-SDI miaraka amin'ny Loopouts. SDI Video Standards (Level A) dia 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL / 720p50,59.94,60 / 1080p23.98,24,25,29.97,30,50,59.94,60 / 1080psf 23.98,24 / 1080i50,59.94,60. Famolavolana mametaka mifehy eo an-damosin'ilay vondrona. Asehoy ireo fepetra 8x 2 "TFT LCD / Resolution 640 × 240 (manohana hatramin'ny 1920 × 1080) / Aspect Ratio 4: 3 / Contrast 300: 1 / Viewing Angle 80. MSRP- $ 1490 Ankehitriny- $ 1341.00
The Osprey RM3G-4K 3G-SDI manohana MultiView sy PIP Modes mampiseho ny marina 3840 × 2160 resolution. Izy io dia toy ny mpanara-maso eo am-pamolavolàna ao anaty trangam-pandehanana mafy na nalaina tao amin'ny 19 "Rackmount Monitor. Manohana ny 3G SDI, HDMI2.0, DVI ary koa ny VGA Video. Ireo efatra HDMI Ny fitaovana dia ahitana tahirin-kevitra HDMI2.0 voafantina ao amin'ny 4K60 plus telo HDMI1.4 voafantina ao amin'ny 4K30. Amin'ny endriny fanampiny dia manohana ihany koa ny Audio Input. Ny fitaovan'ny fitaovam-peo sy ny mpandahateny miditra dia manome fepetra fanaraha-maso Audio. Ny safidy MultiView dia ahitana ny fanohanana ny Dual / Quad View sy ny PIP Mode. Ny endritsoratra rehetra dia azo ampiasaina amin'ny karazana Layout samihafa manomboka amin'ny Side-by-Side Dual View, PIP ka hatramin'ny Quad View. Ny fanaraha-maso eo an-toerana dia ahitana ny Video Input Selection, ny fanitsiana ny fanovozana, ny jiro mpanazava ny tale, ny marika afovoany sy ny safidy, ny aspect ratio, ny fikandrana ny rafitra, ny faharetana H / V, ny fizahana sehatra, ny sandoka, ny lozam-pandrefesana, ny zoom, ny sary, ny PIP, Multi View . MSRP- $ 1090.00 Ankehitriny- $ 981.00
Jereo ny tsipika feno Osprey Video Monitors at www.ospreyvideo.com/index.php . Eto ambany ny Lisitry ny vokatra. Azo antoka koa ny mandeha any Osprey Stand 7.D19 ao amin'ny IBC2018, RAI Amsterdam. Fampiratiana nanomboka tamin'ny Septambra 14th-18th!
Osprey VideoNy teknôlôjia fanatontosana horonantsary malaza dia naharitra ela be ny famoahana lahatsary amin'ny sehatra an-tserasera any amin'ny indostria manomboka amin'ny fampielezam-peo, fahitalavitra amin'ny aterineto, ary fanaraha-maso, ho an'ny orinasa, governemanta ary fiaramanidina. Ankehitriny, ny teknolojia ao amin'ny sari-tany misy azy sy ny mpamily no fototra iorenan'ny endriny farany amin'ny vokatra mivelatra sy kodia, izay mamela ny mpanjifa hanome fahafaham-po kokoa ny fanantenana ho an'ny lahatsary an-tserasera amin'ny tontolo rehetra, anisan'izany ny A / V nentim-paharazana tontolo toy ny fanabeazana, ny serasera, ary trano fivavahana. Ny orinasa dia manitatra tsy tapaka ny portfolio'ny vokatra ho an'ny mpanjifa mangataka ireo fitaovana avo lenta sy azo antoka amin'ny fampiharana amin'ny horonan-tsary manomboka - amin'ny horonan-tsary momba ny IP mihidy captioning, Finday 4K mivantana ny fisamborana sy fizarana ... ary any an-dafin'i. Raha mila fanazavana fanampiny dia hita ao amin'ny www.ospreyvideo.com.
fampitana injeniera fampitana Engineering SoftAtHome, MStar, CES2017 Ultra HD Forum Video injeniera	2018-08-27
Previous: Vislink dia manome fampitaovana teknolojia ho mpaninjara ho an'ny Volvo Ocean Race
Next: LiveU dia mitondra live valo andro miala ny 2018 Silk Road Off-Road Rally ao Rosia
Hey Buddy !, Nahita ity fampahalalana ity ho anao aho: "Ny Video Osprey dia nahazo ny vidin'ny fampisehoana amin'izao fotoana izao amin'ny Septambra 28th!". Ity ny tranonkala: https://www.broadcastbeat.com/osprey-video-has-promo-pricing-available-now-thru-september-28th/. Misaotra anao.